मंगलबार देखि सुरू हुँदैछ मलमास : हो मलमास ? के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ?
Sunday, 13 May, 2018 12:34 PM
मलमासको बेला शुभकार्य गर्न हुँदैन भन्ने प्रचलन छ । भर्खर बिहाह गरेका दुलाहा दुलही पनि संगै बस्न नहुने भन्ने प्रचलन अनुरूप मलमास छल्न श्रीमान र श्रीमति छुट्टै बस्ने गर्दछन् । यो वर्ष पनि जेष्ठ १ गते अर्थात् मंगलबारदेखि मलमास सुरू हुँदैछ । मंगलबार बेलुका ५ बजेर ५३ बाट प्रतिपदा शुरू भएसंगै अधिक मास पनि प्रारम्भ हुने र जेष्ठ ३१ गते प्रातः २ बजे औंशी समाप्त भएसंगै अधिक मास पनि समाप्त हुने पञ्चाङ्क पात्रोमा पाइन्छ ।
ज्योतिष विज्ञानका अनुसार सूर्यको गतिलाई आधार मानि गणना गरिने वर्षलाई सौर्यवर्ष भनिन्छ र यो सौर्यवर्षको मान ३६५ दिन १५ घडी २२ पला र ५७ विपला हुन्छ । जबकि चन्द्रमाको गतिको आधारमा गणना गरिने वर्षलाई चन्द्रवर्ष भनिन्छ । चद्रवर्ष ३५४ दिन २२ घडी १ पला र २३ विपलाको हुन्छ । यसप्रकार सौरवर्ष र चन्द्रवर्षको वर्षमानमा प्रतिवर्ष १० दिन ५३ घडी २१ पला अर्थात् लगभग ११ दिनको फरक पर्दछ । अत ः सौरमासभन्दा चन्द्रमासको दिन गणनाअनुसार वर्षमा ११ दिन फरकहुने गर्दछ । यसै अन्तरलाई समानता बनाउन चान्द्रवर्ष प्रत्येक लगभग ३ वर्षमा १२ महिनाको ठाउँमा १ महिना अधिक भई १३ महिनाको हुन्छ । यसरी गणना गर्दा प्रत्येक ३२ महिना, १६ दिन, १ घण्टा र ३६ मिनेट पूराभएपछि अर्को अधिकमासबाट अर्को अधिकमास आउँछ । सूर्यले एउटा राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्नुलाई संक्रान्ति भनिन्छ र चन्द्रमासको शुक्लपक्ष र कृष्णपक्ष भित्र सूर्य संक्रान्ति नपरेकै कारण अधिकमास हुन पुग्दछ , अधिमासलाई मलमास या पुरुषोत्तम मासपनि भनिन्छ । यस्तो अधिकमास यसपाली जेष्ठ महिनामा परेको छ । विशेष कुरा के छ भने अधिक मास चैत्र देखि अश्विन सम्म मात्रै हुन्छ । कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष महिनामा क्षय मास हुन्छ र माघ फाल्गुनमा अधिक या क्षय मास कहिल्यैपनि हुँदैन ।
अधिकमासमा भगवान नारायणको पूजा गरिने र अधिकमासमा माहात्म्य वा कथा सुन्ने र दान गर्ने परम्परा रहेको छ । यसो गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन भनेर कथामा बताईएको छ । अधिक मासमा कुनै पनि शुभ कर्महरू वा साईतहरू हुदैनन् । यसै हुनाले महिनाभरी कुनै पनि विवाहादि कार्य व्रतवन्ध लगायतका कुनै पनि कार्यहरू छैनन । दैनिक रूपमा गर्दै ल्याईएका कर्महरू जस्तो नित्य पाठपूजा गर्नलाई चाहि कुनै छेकथुन हुदैन ।
वैदिक परम्परा अनुसार नेपालको इतिहासमा छैटौ शताब्दिदेखि सोह्रौ शताब्दीसम्मका अभिलेखहरूमा आषाढमा र पौषमा मात्र अधिकमास पाइन्छ । पछि आएर भने अनादी वैदिक परम्परालाई छोडी तेह्रौ शताब्दीको सिद्धान्तशिरोमणीको ज्योतिषफलबाट अन्य महिनाहरूमा पनि अधिकमास परेको उल्लेख गरेको पाईन्छ । पतिगृहमा विवाहदेखि पछिको पहिलो वा विवाह गरेको वर्षमा आउने महिना आषाढमा बस्ता बुहारीले सासू पिर्ने, पहिलो क्षयमासमा बस्ता आफ्नै शरीरलाई पीडा गर्ने, पहिलो जेठमा बस्ता जेठाजु पिर्ने, पैलो पुसमा बस्ता ससुरालाई पिर्ने पहिलो अधिकमासमा बस्ता पतिलाई पिर्ने, पहिलो चैतमा पितृगृहमा बस्ता आफ्नै बाउलाई पिर्ने कुरा मुहूर्तमार्तण्डदिकामा पाईन्छ । मुहूर्तमार्तण्डको १६२८ संवत्मा र मूहूर्त्चिन्तामणिको १६५७ संवत्मा रचना भएको हो । यस्ता हुने नहुने कुराको प्रतिपादन गर्ने अरु सबै ग्रन्थ यी ग्रन्थहरूभन्दा पछिका देखिन्छन् । वैदिक परम्पराका प्राचीन ग्रन्थहरूमा यस कुराको प्रतिपादित देखिदैँन ।
यस्ता ग्रहगत अधिकमास र क्षयमासका समय समायोजन गर्ने कार्यहरूमा अन्न विभिन्न स्थानमा बेग्ला बेग्लै विधि र किसिम पनि पाईन्छ । यसै सौरमास र चन्द्रमासलाई तीन वर्षमा समायोजन गरिने हुदा यस अवधिलाई अधिकमास भनेर भनिएको हो । सौरमास जब सूर्य–चन्द्रमाको गतिमा आधारित हुने र चान्द्रमास तिथिमा आश्रित हुने भएकाले सौर्यमास जस्तो चान्द्रमास सामान्यतय गतिमा निश्चित हुदैन । यहि नियम अनुसार अधिकमास वा महिना बृद्धि हुने हुन्छ ।
के मलमास डरलाग्दो अशुभ समय हो ?
ज्योतिषहरूका अनुसार मलमास वा अधिकमास त्यस्तो कुनै डरलाग्दो अशुभ समय होईन । वर्ष दिनलाई ठीकसँग मिलाउनकोलागि मलमास र क्षयमास आउने गर्दछ । पाश्चात्य परम्परामा ‘लिप इयर’को सहायताबाट वर्षलाई कायम गर्ने गरिन्छ । लिप इयर हरेक तीन वर्षमा ठीक समयमा आउने गर्दछ भने अधिक मास चान्द्रमासको गतिमा निर्धारण हुने गर्दछ । हाम्रो समाजमा कसैको जन्म मृत्यु अधिकमासमा भयो भने यसलाई राम्रो नमान्ने चलन छ । कसैको मृत्यु र जन्म हुनु स्वभाविक हो तर अधिक मासमा मृत्यु वा जन्मलाई वार्षिक रुममा मनाउन समय केलाउनु पर्ने हुन्छ । यसै हुनाले पनि नराम्रो हो भन्ने मान्यता रहेको हो । ‘तीथ्यर्धे प्रथमे पूर्वोऽपरस्मिन्नपरस्तथा, मासाविति बुधैश्चिन्त्यौ क्षयमासस्य मध्यगौ’ अधिकमासमा जन्म वा मृत्यु भएमा अधिक पक्षको जुन तिथि छ शुद्ध पक्षको त्यहि तिथि कायम हुने प्रमाण पाईन्छ । क्षयमासकालगि भने शुक्लपक्षको पहिलो महिना र कृष्णपक्षको पछिल्लो महिना गणना गरिन्छ । त्यसमा पनि तिथिमानलाई दुई भागमा गरी तिथिको पूर्वाद्धमा जन्म वा मृत्यु त्यसको जन्म दिन वा मरणतिथि पहिलो महिनाको सोहि तिथि तथा उत्तराद्धमा जन्म वा मृत्यु भएमा पछिल्लो महिनाको समानपक्षको सोहि तिथि त्यसका लागि जन्मतिथि वा मरणतिथि हुने शास्त्रिय प्रमाण पाईन्छ ।
गर्न नहुने कार्य–
अधिक मासमा विवाह गरेमा गृह सुख हुदैन गर्भाधान गरेमा बच्चा रोगी जन्मन्छ ।नव विवाहित दाम्पत्तीहरूकालागि अधिक मासमा अलग बस्नु राम्रो हुन्छ ।
अधिकमासमा मरेका व्यक्तिको मासिक र श्राद्ध कैले गर्ने?
अधिकमासमा मृत व्यक्तिको मासिक श्राद्ध १७ वटा गर्नुपर्छ । सोह्रवटा त सबैको हुने गर्दछ, अधिक मास भनेको एउटा चान्द्रमास बढी हुने सौर्य महिना हो । त्यही एउटा महिना मृत व्यक्तिको और्धवदेहिक कर्मसँग पनि गाँसिएको हुन्छ । सामन्यतया मलमास वार्षिक सूतक बारेको अवसरमा बिचमा परे पनि १७ वटा नै मासिक हुन्छन्, तर अधिक मासमैं मृत व्यक्तिको के गर्ने भन्ने सवाल सबै तिर उठ्ने गर्दछ । व्यवहारिक रूपमा यो अलि विशिष्ट पनि देखिन्छ।
अधिकमासमा सम्झनु पर्ने एउटै कुरो हो – अधिक शुक्लपक्षमा मरेका व्यक्तिको श्राद्ध अर्को वर्ष त्यही महिनाको शुक्लपक्षमा हुन्छ भने अधिक कृष्णपक्षमा मरेका व्यक्तिको श्राद्ध अर्को वर्षको एकमहिना पछिको कृष्णपक्षको तिथि समातेर गर्नुपर्दछ । त्यस्तै यसपाली मलमासको शुक्लपक्षमा मरेकाहरूको एकोद्दिष्ट श्राद्ध प्रत्येक वर्ष शुक्ल पक्षमा पर्ने तिथि समातेर र मलमासको कृष्णपक्षमा मरेकाहरूको एकोद्दिष्ट श्राद्ध प्रत्येक वर्ष कृष्ण पक्षको सम्बद्ध तिथि समातेर गर्नुपर्दछ । तर फेरि उही महिनामा नै मलमास पर्न आयो भने मलमासको सम्बद्ध तिथि समातेर एकोद्दिष्ट गर्नु पर्दछ।
अधिकमासमा धार्मिक व्यवस्था
एक संवत्सर प्राय : १२ महिनामा पूरा हुन्छ । अढाई वर्षमा तिथिको टुट भएको कारण तथा ज्योतिषीय गणितद्वारा निर्धा्रित भएर एक संवत्सर १२ महिनाको सट्टा १३ महिनाको हुन्छ जसलाई अधिक मास, मलमास वा पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ । जुन महिनामा सूर्यको सङ्क्रान्ति पर्दैन त्यस मासलाई अधिक मास मान्ने परम्परा चलिआएको छ । अधिकमासमा शुभ धार्मिक कार्यहरू जस्तो विवाह, उपनयन, वास्तुपूजा आदि प्रायस् नहुने हुँदा पनि देवी–देउताहरूको पूजा भने प्रशस्त गर्ने गरिन्छ । भगवान् पुरुषोत्तमले यसलाई आफ्नो नाम दिएर यसको महत्व प्रदर्शित गर्नुभएको छ । भगवान् पुरुषोत्तमले स्वयंलाई अधिकमासको स्वामी बनाएर यो महिना सबै महिनाको अधिपति हुनेछ भन्ने वरदान दिनुभएको छ ।
यो महिना जगत्मा पूज्य एवं वन्दनीय मानिएको छ । यस महिनामा जसले अधिकाधिक धार्मिक कार्य गर्नेछ उसको दुस्ख–दारिद्रय नष्ट हुनेछ । यस महिनामा श्रीमद् भागवत कथाको आयोजन अत्यन्त फलदायक मानिन्छ । भाद्र महिनामा यदि अधिक मास परेको छ भने दूर्वाष्टमीको व्रत गर्ने शास्त्र निर्देशन रहेको पाइन्छ । भविष्य पुराणको अनुसार यस महिनामा उमा महेश्वरको षोडशोपचार पूजन गरेर सात प्रकारको पुष्प, फल, दूर्वा, नैवेद्य अर्पण गर्नाले धनार्थीलाई धन, पुत्रार्थीलाई पुत्र, कामार्थीलाई कामको प्राप्ति हुन्छ ।
अधिक मासमा गर्ने धार्मिक कृत्य व्रत, दान, पुण्य आदिका लागि भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ–यसको फलदाता,भोक्ता र अधिष्ठाता जम्मै म नै हुँ । यस महिनामा एकभुक्त, नक्त वा उपवासका साथै भगवान् भास्करको पूजन तथा कास्यपात्रमा अन्न वस्त्र भरेर दान गर्नु फलदायी हुन्छ । प्राचीनकालमा राजा नहुषलाई इन्द्र पद प्राप्त भएको थियो ।
घमण्डमा आएर उनले अगस्त्य ऋषिलाई आफ्नो पालकी बोक्ने काममा नियुक्त गरेका थिए । आफू पालकीमा चढी ऋषिलाई सर्प–सर्प (छिटो हिंड) भन्न थाले । आफ्नो यस्तो घृष्टताका कारण राजा नहुष आफैं सर्प बन्न पुगे । अन्तमा व्यासको आदेशानुसार राजा नहुषले अधिक मासको व्रत बसेर सर्पयोनिबाट मुक्त भएको कथा पुराणहरूमा वर्णित छ । यस व्रतको विधान पुराणहरूमा निम्नानुसार वर्णित छ ।
अधिकमास प्रारम्भ भएपछि सधैं बिहानै नुहाइधोई गरेर पवित्र भई विष्णुस्वरूप सहस्त्रांशुुसूर्य भगवान्को पूजन गर्नुपर्दछ । विविध प्रकारको घिउ, चाकु र अन्नको नित्य दान गर्नुपर्दछ तथा घिउ, चाकु तथा अन्नले बनेका तेतीसवटा पुवा कांस्यपात्रमा राखेर अधिकमासका तेतीसवटा देउताहरूका लागि–विष्णुरूपी सहस्त्रांशुस् सर्वपाप प्रणाशनस् । अपूपान्न प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु।। मन्त्र उच्चारण गरेर प्रतिदिन वा आफ्नो सामथ्र्यअनुसार दान गर्नुपर्दछ । यस प्रकारले पूजाआजा गर्दा सबै प्रकारको धन्य–धान्य, पुत्र तथा परिवारको उन्नति हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार
पतिगृहमा विवाहदेखि पछिको पहिलो वा विवाह गरेको वर्षमा आउने महिना आषाढमा बस्ता बुहारीले सासू पिर्ने, पहिलो क्षयमासमा बस्ता आफ्नै शरीरलाई पीडा गर्ने, पहिलो जेठमा बस्ता जेठाजु पिर्ने, पैलो पुसमा बस्ता ससुरालाई पिर्ने पहिलो अधिकमासमा बस्ता पतिलाई पिर्ने, पहिलो चैतमा पितृगृहमा बस्ता आफ्नै बाउलाई पिर्ने कुरा मुहूर्तमार्तण्डदिकामा पाईन्छ । मुहूर्तमार्तण्डको १६२८ संवत्मा र मूहूर्त्चिन्तामणिको १६५७ संवत्मा रचना भएको हो । यस्ता हुने नहुने कुराको प्रतिपादन गर्ने अरु सबै ग्रन्थ यी ग्रन्थहरूभन्दा पछिका देखिन्छन् । वैदिक परम्पराका प्राचीन ग्रन्थहरूमा यस कुराको प्रतिपादित देखिदैँन । दिब्य ज्योतिस र अन्य धार्मिक ग्रन्थबाट